Topnepalnews.com | ४४ खेलाडीलाई राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा,को-को परे ? (नामावली सहित)
४४ खेलाडीलाई राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा,को-को परे ? (नामावली सहित)
Posted on: May 01, 2016 | views: 437
काठमाडौं,फागुन ३० । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक ग्योटुकी कोजीले मलेसियासँगको खेलका लागि ४४ खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएका छन् । कोजीले आगामी चैत्र १४ मा मलेसियाको यु २२ टोलीसँग हुने मैत्रिपूर्ण फुटबलका लागि बन्द प्रशिक्षणमा प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेका
हुन् । उक्त टोलीको प्रशिक्षण मंगलबारबाट सुरु हुने छ । प्रारम्भिक टोलीमा रहेका ४४ जना मध्येबाट अन्तिममा २३ जना खेलाडी छनौट गरिने छ ।
भारतमा भएको बाह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग र साफ च्याम्पियनसिप फुटबल तथा बंगलादेशमा भएको बंगबन्धु गोल्डकपमा सहभागी खेलाडी टोलीमा छन् । यस्तै बारामा भएको सिमरा गोल्डकपमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा पनि केहि खेलाडी छानिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ ।
स्ट्राइकरहरूः अनिल गुरुङ, नवयुग श्रेष्ठ, बिमल घर्तीमगर, रञ्जन बिष्ट, सुमन लामा, कर्णकुमार लिम्बु, बिश्वास श्रेष्ठ र भरत खवास छन् ।